Caafimaadka carruurta Soomaaliyeed. Somali Kidshealth Internet site
Daadah.com – Mareegta Caafimaadka Ubadkeena
[message_box title=”KU SOO DHAWOOW DAADAH.COM” color=”red”]Shaashadaan ama webkaan waxaan u hibaynay Carruurta Soomaaliyeed iyo waalidiinta. Waxaa halkaan ku kaydsan mawduucyo caafimaad oo ubadkeena daryeelkiisa ku saabsan. Waxaan ugu talagalay in waalidiinta iyo adeegayaasha caafimaadku u isticmaalaan sidii maktabad caafimaadka carruurta oo electaroonik ah.[/message_box]
[column col=”1/3″]NAAS-NUUJINTA: Go’aanka hooyanimada iyo naas-nuujintu waa mid waajib diini ah. Mawaadiicda diiniga ah iyo xirfadlayaasha caafimaadka carruurtu waxay isku raacsan yihiin in ilmaha naaska la nuujiyo ugu yaraan sannad. Diinta Islaamku in ka badan sannad in naas-nuujintu socoto ayayba qabtaa.
Sii akhri→ [/column]
[column col=”1/3″]CALLOOL-QALAYL: Callool-qalaylka carruurtu waa marka ilmuhu muddo caadiyan maalmo ah uusan saxaroon ama haddii uu saxaroodaba ay ka timaado saxaro adag oo si xanuun leh uga soo baxda malawadka. Inta badan callool-qalaylku waa calaamad joogto ah oo ilmaha oo dhan ku dhici karta..
[column col=”1/3″]JADEECADA: Cuddurka Jadeecada waxaa keena jeermiga Viruska. Waa cuddur dilaa ah oo ku dhaca inta badan carruurta yaryar ee jira 1-4 sanno. Waxaa laga yaabaa inuu horseedo caabuqa dhegaha, Nimooniya, menengitis iyo bararka maskaxda ama geeri. Cunnug kasta oo aan la talaalin way ku dhici kartaa jadeecadu..
[column col=”1/3″]CABBEEBKA: Cabeebku waa cuddur ku dhaca inta badan carruurta yar yar. Cuddurkaani wuxuu ku dhacaa qowlalada afka, carrabka iyo saqafka afka. Waxaa keena nooca jeermiga ee la yiraahdo Fungi. Jeermiga fungus ama candida waxaa laga helaa jirkeena isaga oo aan dhib ama jirro noo keenayn. Waxaa laga helaa afka, mindhicirada iyo..
[column col=”1/3″]SONKOROWGA: Kaadi-sonkorowgu waa cuddur ka yimaada marka dhiigga ay saa’id ku noqoto xaddi badan oo sonkor ah. Nooca la yiraahdo type 1 Diabetes wuxuu inta badan ku dhacaa carruurta, halka Type 2 diabetes uu ku dhaco dadka waawayn marka ay gaaraan inta badan …
[column col=”1/3″]CUDDURKA DABAYSHA: Cuddurka dabaysha waa cuddur la is-qaadsiiyo ah oo dilaa ah, kuna dhaca inta badan carruurta ka yar 5ta sanno. Waxaa keena nooc fayras ah oo la yiraahdo Poliovirus oo weerara habdhiska darreen-wadayaasha ee jirka. Wuxuu naafayn karaa …